ယခုသတင်းအတွက် မှတ်ချက်အားလုံးကို ဖတ်ရှုန် RFA မြန်မာဌာနသို့ ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ
Maung Ne Hein နေရပ်- Canada :
rJpm&if;trSm;rsm;ESif ywfouf aqG;aEG;vkdonfrSm ...
1) Printer xGufvmaom pm&Gufrsm;udk udktb,faMumifh rppfaq;ekdifMuoenf;/ aiGtiftm; r&Sd I vltiftm;rokHekdif I avm/ (taemufekdifiHawGrS a&G;aumufyGJtwGuf $20 million axmuf yHhxmaMumif; owif;rsmt& odxm;ygonf/ xdkodkUqdkvsSif aiGtiftm;&Sdygonf)
2) oHo& Nzpf &ef&SdonfrSm OD;wifat; onf computer eSifhywfouf I A[kokw &SdykHr&yg/ ,if;oHo,udk Oyrm wckNyqkd&vsSif .. ..
udkZm*emudk electronic Nzifh axmifcscJhaom w&m;olMuD;onf computer rokH;bl;ovdk A[kokwr&Sdaom ,if;w&m;olMuD;u email vdyfpmawmifqkd&mwGif gmail udkay;vdkuf&m w&m;olMuD; \_ag owMuD; wkHU NyefrSK udk udkZm8em cH& bl;onf/
OD;wifat;onf computer udkem;rvnf I omvsSif rJpm&if;\_ 30% udkom wm0ef,lekdifonf [kaNymqkdcJhNcif;Nzpfonf/
,if;u T e,fy,fwGif A[kokw r&SdI atmufajcrS bufawmfom;rsmu ajymvmonfh twkdif; jyef-um;ajymqkd aejcif;omjzpfedkifygonf/
I have used Win Innwa and M-Myanmar1 font
Thank you for your attention in this email.
Sep 22, 2015 04:15 PM
Cho Latt နေရပ်- Las Vegas, USA :
8/21 news about Thin Thiri interview on NLD restricting Election candidates not to interview with media. U Nyan Win explanation is reasonable & fit with Burma situation, Thin Thiri is comparing human rights issue in Burma with USA; they are still African standard, not even to compare with Asian, and far away from USA.She & Min Lwin Oo are living in USA & Thai and talking human right in Burma; still military dictator and will not wish to handover power to democracy parties, look at Shwe Mann's late case; Thin Thiri go and stay in Burma & talk freedom of speech to Min Aung Hlaing or let her interview him; she will be smashed. Is she spy of military ?
Aug 21, 2015 06:03 PM
အမည်​မသိသူ နေရပ်- ကျ​နော်​ မင်းပြားမြို့နယ်​ ကပါ :
May 01, 2015 02:13 PM
Bamar နေရပ်- Myanmar :
It would be great if we can know how things are happening at this special event.
Sep 22, 2014 11:17 PM
ကျွန်​​တော်​ကစစ်​​တွေကပါ RFA ကိုအား​ပေးပါတယ်​
williamdavidsan နေရပ်- ချင်းပြည်နယ်၊မတူပီမြို့ :
mg tin win နေရပ်- pattaya,thailand :
me one new everyday
မင်္ဂလာပါ rfa ကိုဆက်သွယ်ရတာအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်အီးမေးလိပ်စာburweb@rfa.org ကိုဆက်သွယ်ပါတယ်အဆင်မပြေပါဘူး နီးစပ်ရာ သတင်းတစ်ချို့ကိုပိုပေးချင်ပါတယ် သတင်းသမားတစ်ရောက်လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်နှင့်အတူ maythuhtat99ကိုပြန်လည်ဆက်သွယ်လိုံ့ရရင်ဆက်သွယ်ပေးစေချင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jun 02, 2014 01:17 AM
ko min min :
May 25, 2014 04:29 PM
RFA အပြင်အဆင်အသစ်ကို သဘောကျတယ်ဗျာ
ခေါင်စဉ်ကြီးတွေကတော့ Font ကြောင့်လားမသိ
Feb 23, 2013 07:01 PM
အပေါက ခင်မောင်စိန်ရီ၇ဲ့ ပိုစ်တမင်တင်ပေးတာ နိပ်ကျသောစိတ်ဓာတ်ကိုတွေံမြင်နုင်ရန်
Jan 14, 2013 01:57 AM
ကိုကို နေရပ်- စင်္ကာပူ :
RFA TV latest post ကိုအင်တာနက်မှာကြည့်လို့မရတာ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒုတိယနေရာမှာရှိတဲ့ TV clip ကိုတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ RFA ကိုနေ့စဉ်အားပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်စစ်ပေးစေလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Jan 07, 2013 11:50 PM
အမည်မဖော်လိုသူ နေရပ်- သထုံ :
aaa နေရပ်- bbb :
Dec 15, 2012 01:37 PM
U Kauk နေရပ်- Thein Naing ) (Los Angeles :
Hi, Due to the photos of Burmese Sanga hit with the Fire Bomb ...seem to be ACID BOMB, such as Sulfuric,Nitric and Hydrochloric...etc.
those Buddhish Sanga suffered ...seem it look like 'NOT'using 'TEAR GAS' BOMB........
Nov 29, 2012 10:57 PM
soenaimintun နေရပ်- matupitown/chin state :
ဆရာဦးဝင်းတင်၏ ခေတ်ဝန်ကိုထမ်း၍ ခေတ်လမ်းကို လျှောက်ခြင်း အစီအစဉ်ကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ အပြည့်အစုံ Update တင်ပေးစေလိုပါတယ်။ အဲဒီစာမျက်နှာကို Update မလုပ်တာများ ကြာပြီလားလို့....
Nov 27, 2012 07:06 PM
Oct 12, 2012 02:45 PM
THE DEATH OF GEN KYAW ZAW,BURMESE COMMUNIST PARTY,CHINA????
မြောက်ပိုင်းသာ� နေရပ်- မဘိမ်း)ရွှေတံခါးများ (ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း :
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မဘ်ိမ်းမြို့နယ်အတွင်း တရာမ၀င် သစ်ခိုးထုတ်ယူမှုများကို တာဝန်ရှိ အာဏာပိုင်များမှ တိကျမှန်ကန် မြန်ဆန်ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးစေလိုပါသည်။ ယခုနှစ်ဆောင်းရာသီရောက်ရင် သစ်ခိုးထုတ်ရန် ပေါက်ဖော်လောပန်းများနှင့် စည်းကမ်းမရှိ သစ်ခုတ်ရောင်းသူများ သူ့ထက်ငါ အပြိုင်အဆိုင်ပြင်ဆင်နေကြ ပါသည်။ ဒီနှစ်သာ ထပ်ဖြစ်ရင်တော့ မဘိမ်းမြို့နယ် သစ်တောကတော့ ဖွတ်ဖွတ်ညှက်ညှက်ကြေပါပြီဗျာ ...
Oct 05, 2012 10:47 AM
Ma Hin Thar :
Please, broadcast my news ASAP about Bago Divisional staff officer U Tun Nwe. I already sent to u from email.
Sep 29, 2012 04:55 AM
အမည်မဖော်လိုသူ နေရပ်- တောင်တွင်းကြီးမြို့ :
ပြေး (၄) ပြေးကို စောင့်ရှောက်ထားသော အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
နိုင်ငံတော်မှ ပြေး(၄)ပြေး ဖမ်း ဆီး အပ် နှံရန် အများပြည်သူသွားလာနေသော နေရာတိုင်းတွင်
ဆိုင်းဘုတ်များတင် အသိပေးကြေငြာပြီး၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေစာအုပ်များတွင် ပါဝင်
ရေးဆွဲထားခြင်းကို သိရှိသော်လည်း တောင်ပြင်(၁) ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးလှသောင်သည်
၄င်း၏သားအရင်းဖြစ်သူ မောင်ကြည်လင်အား ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပြီး လောင်းကစားဝိုင်း
များအား တာဝန်မဲ့စွာပြုလုပ်နေကြောင်း နိုင်ငံတော်မှသိစေအပ်ပါသည်။
Sep 28, 2012 02:17 AM
ပြည်မြို့ က သစ်ထုတ်ရေးဒေသမန်နေဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပေးပို့ထားသော အကြောင်းအရာအား လိုအပ်သလို တင်ပြပေးပါရန် ထပ်မံအကူအညီ တောင်းခံအပ်ပါသည်။ကြော်ငြာပေးစေလိုပါသည်။
ပြည်မြို့ သစ်ထုတ်ရေးမန်နေဂျာသည် သူ၏တပည့်များနှင့်သူကိုပေးနေသောသူများကိုသာနေရာပေးပါသည်။သူပြောင်းလာပြီးကတည်းက ၀န်ထမ်းများ၊နေ့စားများ၊ယာဉ်မောင်းများ အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့နေရပါသည်။အဆင်ပြေသောသူ များမှာ သူရယ်၊သူ့တပည့်ဆိုသောသူတွေရယ်၊ပေးနိုင် ကမ်းနိုင်တဲ့သူတွေရယ် ဖြစ်ကြပါသည်။မျှတမှု့လဲမရှိတာ တွေ့နေရပါသည်။လူအနည်းစု ကအဆင်ပြေနေပြီး အများစုကအခက်အခဲ အကြပ်အတည်း များစွာဖြစ်ပေါ်နေပါသောကြောင့် အထက်လူကြီးများသိသာ မြင်သာစေရန် အတွက် RFA မှတဆင့်အကူအညီ တောင်းခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Sep 21, 2012 11:52 PM
ပြည်မြို့ သစ်ထုတ်ရေးမန်နေဂျာ အကြောင်း ပို့ပေးထားတာကို တင်ပြပေးဖို့ (REQUEST) လုပ် ပါတယ်။
Sep 21, 2012 01:40 AM
NYI NYI နေရပ်- Singapore :
Dear RFA Burmese, I am very willingly to have all the weekly broadcast "Nyein Chan Yae Paet Tin Than" by (U)Myo Myint. Unfortunately these files are not in the weekly broadcast list. Appreciate that I can have it all. Best Regard
NYI NYI (nyiyin@gmail.com)
Sep 20, 2012 02:52 AM
RFA ရဲ့ အသံလွှင့်ဝန်ထမ်းများ အမည်နဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို ဘာလို့ website တင်ပေးစေချင်ပါတယ်
R F A T V news March 16
for U Win Naing - Newsreader
It is pronounced ' Mit Chell ' . Not MiChelle ..
You said not less than two times .by saying ' Mi Shell ' .
Just correcting .
Mar 16, 2012 07:16 PM
TV program captions
' s ' is missing .
Not ' All Right Reserved '
PHOTOS OF RFA MEMBERS
Feb 05, 2012 09:53 PM
CONTACT TO ME AS SOON AS POSSIBLE,213-361-2585
Jan 23, 2012 01:56 AM
RFA ကို iPHONE တွေကနားဆင်နိုင်ပြီးကျနော်တို့ ANDRIOD တွေကနားဆင်နိုင်မယ့် software ဘာလို့မထွက်တာလဲမသိဘူးနော်
Dec 21, 2011 08:21 PM
Nov 04, 2011 12:18 AM
နေ့စဉ်သတင်းများအား အသံဖိုင်ဖြင့် လက်ခံနားဆင်လိုပါသည်။
Sep 13, 2011 11:13 PM
Aug 16, 2011 03:48 AM
Mr. Tay Zar Aung
( Marketing , International Marketing Manager )
Company : Equip Medical System Company LTD
Address : No(1), Thukha Street, Hlaing Township, 8 Quater, Yangon. Myanmar, Yangon, Hlaing, Myanmar
Zip/Postal : 959
Telephone : 95-9-500-4907
Fax : 95-1-200-582
Mobile : 95-9-500-4907
'ဒီလူဟာ အောက်ပါ website ကို ဖန်တီးခဲ.သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်
ညစ်ညမ်းပြီး အသုံးမဝင်တဲ. website တစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်
ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီ website ကိုဖျက်ဆီးပေးဖို. မြန်မာတပြည်လုံးကို ကြေငြာပေးဖို. အားလုံး ကို တောင်းဆိုချင်ပါတယ် မြန်မာပြည် အစိုးရကိုပါ ကြေငြာ ပြီးတော. ယုတ်မာတဲ.သူတစ်ဦးအဖြစ် ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးစေချင်ပါတယ်
Aug 14, 2011 10:52 PM
ဗွီဒီအို သတင်းမှာ သတင်းကြေညာသူရဲ့ပုံကကြီးနေပြီး သတင်းအကြောင်းပြသချက်က သေးနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများလွှင့်ထုတ်မှုနဲ့က ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေသလားလို့။ ကြေညာသူကို အသားပေးတာလား။ သတင်းအကြောင်းအရာကိုအသားပေးမှာပါလား။
Jul 11, 2011 06:34 PM
http://khoutdawnmyanmar.blogspot.com/ တွင် ဗွီဒီယို ဖိုင်ရှိပါသည်.
Apr 15, 2011 06:08 AM
သတင်း ပေး ပို့ချင်ပါသည်.
RFA ၏ Phone No. 202-530-4900 ကို အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်သော်လည်း ဖုန်းမကိုင်ပါ။ ရုံးထိုင်ချိန်ဟာ USA စံတော်ချိန်လား၊ မြန်မာ စံတော်ချိန်လား။ ရုံးထိုင်မယ့်အချိန်၊ ဖုန်းကိုင်နိုင်မယ့် အချိန်ကို သိချင်ပါသည်။
Jan 09, 2011 07:15 AM
Nov 16, 2010 07:53 PM
ဦးသစ်စင်းရဲ့လူငယ်တို့ရဲ့မနက်ဖန်ကိုနားထောင်ရပါတယ်၊ အဲဒီအထဲမှာ အာဖရိကကဟေတီနိုင်ငံဆိုပြီးကြားလိုက်ရပါတယ်၊
ဟေတီက တောင်အမေရိကမှာရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံပဲဖြစ်တာမို့လွှဲမှားနေသည်ဟုထင်ပါတယ်၊ ပြင်ဆင်ပြောဆိုပေးနိုင်ပါက
Apr 22, 2010 01:21 PM